युद्ध मेशिन मोड मेनू एन्ड्रोइड को लागी नि: शुल्क डाउनलोड गर्नुहोस् [क्यासपो द्वारा वीआईपी मोड]
पोस्ट: अक्टोबर 17, 2021 अक्टोबर 17, 2021
यदि तपाइँ भारी तोपखाना संग युद्ध खेलहरु लाई माया गर्नुहुन्छ, तब युद्ध मशीनहरु मोड मेनू तपाइँको लागी सबै भन्दा राम्रो विकल्प हो। यो खेल को एक मुक्त संशोधित संस्करण हो कि तपाइँ तलको लिंक को उपयोग गरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाइँ पहिले खेल को अनुभव गर्नुभएको छैन, यो तपाइँको लागी सबैभन्दा राम्रो समय हो। किनकि यो मोड मेनु हो कि गेमप्ले धेरै सरल र तपाइँको लागी सजिलो बनाउनेछ।
युद्ध मेसिन मोड मेनू के हो?
कसरी डाउनलोड र युद्ध मिसिन मोड मेनू Apk स्थापना गर्ने?
युद्ध मिसिन मोड मेनू WM गेमिंग अनुप्रयोग को संशोधित संस्करण हो। तपाइँ एक मेनु वा धोखा पाउन सक्नुहुन्छ कि तपाइँ गेमप्ले लाई सजिलो र सरल बनाउन को लागी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसोभए, यसको माध्यम बाट, तपाइँ सजीलै पुरस्कार जित्न र स्तरहरु पूरा गर्न सक्नुहुन्छ। यो अगाडि तपाइँ खेल मा संसाधनहरु को विभिन्न प्रकार को अनलक गर्न को लागी अनुमति दिन्छ।
यो एक छ कार्य गेमिंग अनुप्रयोग जहाँ तपाइँ अचम्मको ग्राफिक्स पाउन सक्नुहुन्छ। यो3आयामी ग्राफिक्स र एनिमेसन मा आधारित छ। यो अगाडि तपाइँ भारी र उन्नत हतियारहरु संग तपाइँ खेल मा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ प्रदान गर्दछ। यो तपाइँ एक यथार्थवादी अनुभव दिन्छ र तपाइँ यसको उपयोग को बारे मा चिन्ता गर्न को लागी आवश्यक छैन।
किनकि तपाइँ निर्देशन पाउनुहुनेछ यदि तपाइँ यसलाई पहिलो पटक खेल्दै हुनुहुन्छ। तपाइँ खेल भित्र निर्देशन पाउनुहुनेछ। तेसैले, तपाइँ यूट्यूब खोल्न र एक एक गरेर भिडियो हेर्न को लागी यो कसरी प्ले गर्न को लागी थाहा छैन। तेसैले, बस आराम गर्नुहोस् र प्याकेज फाइल समात्नुहोस् र तपाइँको एन्ड्रोइड मोबाइल फोन मा स्थापना गर्नुहोस्।
जे होस्, तपाइँ विभिन्न प्रकारका मिशनहरू पाउनुहुनेछ जुन निश्चित रूपमा जटिल हुनेछ। त्यसोभए, तपाइँलाई शुरू बाट नै शुरू गर्न को लागी आवश्यक छ। एक पटक तपाइँ मिशन पढ्नुहुनेछ, तब तपाइँ जान्नुहुनेछ कि तपाइँ त्यो मिशन मा के गर्न को लागी हुन्छ। सबै निर्देशन, मिशन, र अन्य विवरण अनुप्रयोग मा दिइएको छ।
जसरी तपाइँ जान्नुहुन्छ कि इन्टरनेट मा यस्तो अनुप्रयोगहरु वा खेलहरु को हजारौं छन् कि तपाइँ डाउनलोड र खेल्न सक्नुहुन्छ। तेसैले, मैले यो वेबसाइट मा केहि अन्य समान खेलहरु लाई साझा गरेको छु। यदि तपाइँ रुचि राख्नुहुन्छ, तब तपाइँ मात्र यस वेबसाइट बाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र रमाईलो गर्न सक्नुहुन्छ। यी वैकल्पिक खेलहरु सामेल छन् बिरालाहरु मोड मेनु र क्र्यास Bandicoot मोड मेनु.
नाम युद्ध मिसिन मोड मेनू
विकासकर्ता रमाइलो खेल नि: शुल्क
प्याकेज नाम com.fungames.battletanksbeta
आवश्यक एन्ड्रोइड ..4.4 र माथि
श्रेणी खेल / कार्य
सबै भन्दा पहिले, मँ तपाइँलाई बताउन दिनुहोस् कि यो खेल को मोड संस्करण हो। त्यसोभए, युद्ध मेसिन मोड मेनू Apk असीमित रत्न, असीमित ईन्धन, र रडार प्रदान गरीरहेको छ। यी महत्वपूर्ण बस्तुहरु छन् कि प्रत्येक खेलाडी को खेल मा मिशनहरु पहिले भन्दा धेरै सजिलो पूरा गर्न को लागी आवश्यक छ।
गेमप्ले धेरै सरल तर खेल्न को लागी जटिल छ। यो युद्ध वा सानो लडाईहरु मा आधारित छ। त्यहाँ बिभिन्न मिशनहरु छन् जुन तपाइँ पूरा गर्न को लागी बीचमा त्यहाँ बिभिन्न उपकरणहरु छन् कि तपाइँ उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाइँ टैंक, रकेट लन्चर, ग्रेनेड, र धेरै अन्य विस्फोटकहरु को उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
यसबाहेक, तपाइँ एक एक गरेर स्तरहरु पूरा गर्न को लागी आवश्यक छ। त्यसोभए, तपाइँ अर्को स्तरहरुमा अगाडि बढ्नुहुनेछ एक पटक तपाइँ मिशन सही र सफलतापूर्वक पूरा गर्नुहुनेछ। तेसैले, तपाइँ एक रणनीति बनाउन र तब सावधानीपूर्वक एक एक गरेर रणनीति लागू गर्न आवश्यक छ।
यदि तपाइँ सोचिरहनुभएको छ जहाँ तपाइँ CasPo द्वारा युद्ध मशीन वीआईपी मोड मेनू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, तब म तपाइँलाई बताउन पर्छ कि तपाइँ सही पृष्ठ मा हुनुहुन्छ। किनकि यहाँ लिंक छ जहाँ बाट तपाइँ यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ।
तेसैले, तल स्क्रोल गर्नुहोस् जहाँ तपाइँ एक डाउनलोड लिंक पाउनुहुनेछ। तपाइँलाई त्यो लि on्कमा ट्याप गर्न र केहि सेकेन्ड को लागी प्रक्रिया को लागी पर्खनु पर्छ। त्यसोभए प्याकेज फाइल लिनुहोस् र यसलाई ट्याप गर्नुहोस् यो तपाइँको फोन मा स्थापना गर्न को लागी।
तर तपाइँ एप स्थापना गर्नु अघि, म तपाइँलाई चेतावनी दिन चाहन्छु कि यो तपाइँको लागी जोखिमपूर्ण हुन सक्छ। यो एक तेस्रो पक्ष धोखा उपकरण हो। तेसैले, तपाइँ यो बाट बच्नु पर्छ यदि तपाइँसँग तपाइँको फोन मा संवेदनशील डाटा वा एप्स छ।
मँ कुनै पनी ग्यारेन्टी दिने छु कि यो सुरक्षित छ वा छैन। तेसैले, तपाइँ केहि अनुसन्धान र डाउनलोड वा तपाइँको आफ्नै जोखिम मा अनुप्रयोग को उपयोग गर्नु पर्छ।
जस्तै मैले माथिको अनुच्छेद मा उल्लेख गरेको छु कि यो एक तेस्रो-पक्ष अनुप्रयोग हो र म यो एप को मालिक छैन। तर यदि तपाइँ अझै पनी रुचि राख्नुहुन्छ भने तपाइँ तल दिईएको लिंक को उपयोग गरेर युद्ध मेसिन मोड मेनू एपीके डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ।
पोस्ट खेल, कार्यTagged कार्य, युद्ध मिसिन मोड मेनू, युद्ध मिसिन मोड मेनू APK, युद्ध मिसिन मोड मेनू डाउनलोड गर्नुहोस्
प्रतिलिपि अधिकार © २००-2004-२०२० [एपीके शेल्फ]